Wasiir Maxamed Kaahin Axmed, Waxaa Uu Ku Guulaystay in Uu Soo Afjaro Colaad Daba Dheeraatay.
Saturday March 03, 2018 - 08:58:54 in Maqaallo by Reporter Burco
Sida aynu wada ogsoonahay Degmada Ceel-afwayn ee gobolka Sanaag, waxaa muddo dheer ka taagnayd colaad daba dheeraatay oo u dhexaysay laba beelood oo walaalo ah oo wada dega degaan ka Darar-wayne, oo qiyaastii 60 kiilomitir ku jira degmada Ceel-wayn.
Shaqaaqadan ayaa mar kale soo cusbaanatay mudadii ay xilka la wareegtay xukuumadda cusub ee uu hoggaaminayo Mudane, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana halkaa ku dhintay dad gaadhaya dhowr iyo toban qof tiro intaa ka badanina way ku dhaawacmeen, arrintaasoo shacabka somaliland iyo xukuumad ahaanba laga xumaaday loona dafa-xaytey siidii loo joojin lahaa.
Hadaba xukuumadda cusub, ayaa dedaal badan arrintaa ka gashay, gaar ahaana wasiirka arrimaha gudaha somaliland Mujaahid, Maxamed Kaahin Axmed, oo dedaal badan geliyey sidii colaada halkaas loogu soo afjari lahaa oo aanay wax danbe u dhexeen.
Wasiir Maxamed Kaahin Axmed, ayaa muddo wiig ka badan ku sugan degmada Ceel-afweyn, waxaanu isa soo horfadhiisey labadii beelood ee walaalaha ahaa ee shaqaaqadu ka dhex dhacday,iyada wasiirku ammaro culus oo dowladnimo dul-dhigay labada beelood, si aanay dib ugu soo noqon arrintan oo kale.
Waxaa muuqata in Wasiir Maxamed Kaahin, uu guul ka gaadhay arrintaa, taasoo ka dhigan in talaabadii ugu horeesay ee wasiirku qaaday intii uu xilka hayay ay hada marayso meel dhamaad ah oo guul laga joogo, iyada oo degaankii wax dheceena la geeyey ciidamo sugaya ammaanka iyo kala danbaynta.
Colaada ceel-afwayn ayaa soo noqnoqotay muddooyin badan, xukuumaddii hore ayaa isku dayday in ay xaliso arrintan, balse kuma ay guulaysan in ay soo afjaraan colaadan gaamurtey, maanta waxaa muuqata in ay xukuumadda cusub iyo wasiirka arrimaha guduhuba ay go’aansadeen in arrintaasi ay halkaa ku dhamaato, iyada oo loo maray dariiq dowladnimo oo aan odhan karo waxaa shaqaysay hanaankii dowladnimo oo markii hore laga warwareegayey.
Wasiirka arrimaha gudaha somaliland Mudane, Maxamed Kaahin axmed, ayaa ah shaqsi door wayn ka soo ciyaaray halkan kii dheeraa ee dalkan somaliland lagu xoreeyey, waana shaqsi fahsan qiimaha ay leedahay nabada iyo xasiloonidu,waana sababta uu dedaalka wayn u geliyey colaada ceel-afweyn oo noqotay mid ciladeeda horey loo saari waayey, balse hada dawadeedii la helay, xalkiina uu miiska saran yahay.
Somaliland oo maanta maraysa meel aad u fiican danteedu waxay ku jirtaa in la wada ilaaliyo nabada iyo kala danbaynta, iyada oo lala shaqaynayo xukuumadda cusub, wasiirka arrimaha gudaha iyo dhamaan hay’adaha ammaanka ku shaqada leh, taasoo aynu ku gaadhayno hadafkeena oo ah somaliland beesha calaamka ka hesha aqoonsi caalami ah.
Waxaynu wada ognahay in wadamo badan oo aduunka mid ahaa sumcadana ku lahaa ay maanta burbureen oo colaado raqaadiyeen, qofkasta oo muwaadin ah oo somaliland ah, waxaa la gudboon ka shaqaynta horuumarka dalka iyo ilaalinta nabad gelyada somaliland.
Waxaan qoraalkayga ku soo uruurinayaa maanta colaadii Ceel-afweyn soo afjarideedii waxaa ku guulaystay, wasiirka arrimaha gudaha somaliland, Mujaahid Maxamed Kaahin axmed, oo waqti badan geliyey dhamaadka colaada degaanka Ceel-afweyn oo muddo soo jiitan tahay.
Wasiirka waxaan leehay bulshada somaliland waxaad ku dhex leedahay magac iyo maamuus maaantana tii uun baa kuu sii korodhay taariikhdii aad somaliland ku lahayd baa kuu sii siyaaday, waxaana muuqata in tallaabadii ugu hireysay ee aad qaado intii aad wasiirka ahayd ay maanta taagan tahay guul.